Ọ kọwara na ọrụ ngo ụlọ oriri ahụ bụ nke malitere n'aka onye nyefere ya ọkwa ọchịchị bụ maazị Peter Obi, bụkwa nke ọ rụrụ naanị ihe ruru pasent iri, wee ruo mgbe ya onwe batazịrị n'ọkwa ọchịchị wee rụchapụ pasent iri iteghete fọrọ afọ.
Ka ọ na-akọwa na ọchịchị ya akwụchaala ụgwọ niile a ga-eji wee dozisie ime ụlọ nkwari akụ ahụ, gọvanọ Obianọ kpọkuru ma dụọ ndị ahụ ka ha malite ọrụ ozigbo ozigbo ma werekwa ezi ọgụgụ isi ha nwere wee rụpụta ntụkwasị obi e nwere n'ebe ha nọ nakwa ihe a na-atụ anya n'aka ha.
Otu mmadụ iteghete ahụ nke onyeisi oche ya bụ onye jibụrụ ọkwa dịka gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị n'oge gara aga, bụ ọkammụta Chukwuma Soludo, nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ ndị nọ na ya, nke gụnyere Kọmishiọna na-ahụ maka ego na steeti ahụ bụ maazị Ifeatụ Onejeme; onyeisi ụlọ ọrụ ANSIPPA bụ Chief Joe-Belly Ekwunife; onyeisi na ọga kpata kpata nke ụlọ ọrụ Golden Tulip West Africa, bụ maazị Amaechi Ndịlị; onyeisi ụlọ ọrụ Stanel bụ maazị Stanley Ụzọchukwu; dọkịnta Ifeyinwa Obegolu; Chiifu Patrick Chidolue; Dọkịnta Chike Akụnyili na Chiifu Chriscata Ameke.
Ha nwere atụmatụ iri na anọ ha na-elegara anya, ma bụrụkwa nke gbakwasịrị ụkwụ n'ịhazị ụlọ oriri ahụ n'usoro nkwekọrịta ijikọ aka ọnụ, bụ nke dị n'etiti gọọmenti steeti Anambra na ụlọ ọrụ Golden Tulip.
N'okwu ya na mmemme bụ nke weere ọnọdụ n'ebe obibi gọvanọ dị n'Amawbịa, onyeisi ụlọ ọrụ Golden Tulip West Africa bụ maazị Amaechi Ndịlị kelere gọvanọ Willie Obianọ maka nkwụdosi ike ya n'atụmatụ ọrụ ahụ ma kwe nkwa na ụlọ ahụ ga-aga n'ihu ịrụpụta ihe a hụrụ anya iji me ka ebumnobi ụlọ ya pụta ihè nakwa iji kwalite ngalaba na ọnọdụ akụnụba nke steeti ahụ.
N'akụkụ nke ha n'otu n'otu, Chiifu Patrick Chodulue na Chiifu Stanley Ụzọchukwu nke ụlọ ọrụ Stanel kọwara na steeti Anambra n'okpuru Obianọ egosiputala n'ụzọ dị iche iche na ihe gbasaara nhazi n'ụdị ọbụla dòrò ya anya; too ya bụ gọvanọ maka ezi mmekọrịta ya na ụlọ ọrụ nnọrọ onwe, ma dụọ ya ka o jide ka o ji maka na nke ahụ ewetela ọtụtụ mmepe dị iche iche na steeti ahụ.
Ihe pụtakarịchara ihè na mmemme ahụ bụ iguzobe ndị ahụ kpọmkwem dịka ndị nhazi nke ụlọ nkwari akụ ahụ, bụkwa nke e mere site n'aka gọvanọ Willie Obianọ.